Matte Black athlọ ịsa ahụ foset Gbasara
Kitchen Faucets, ite filler, ụlọ ịwụ fosets
Ikpokoro efere Faucets
Ime ụlọ ịsa ahụ
Single Handle Ime ụlọ ịwụ ahụ
Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ
Isi nri kichin
Ngwa eji aru ulo
Ngwa ndị ọzọ Faucet
Nbanye / Debanye aha
search Nnyocha saịtị
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ / WOWOW Matte Nwa Abụọ Ebe Aka Ebe Blọ mposi Na-asa Ahụ
WOWOW Matte Black-Handle Woole ime ụlọ ịwụ
gosiri 4.87 nke 5 dabeere na 23 ahịa Fim
(23 ahịa reviews)
A na-eji mkpuchi mmiri na-adị ọcha mmiri ahụ, nke nwere ike ichebe elu ahụ pụọ na nchara.
Imi mmiri na drainage sooks na-ẹdude ke ùkwù. Jide n'aka na ị ga-eji ngwaahịa azụmaahịa adịchaghị maka Wellbeing gị
Nchịkwa Okpomọkụ - Ndị na-ejide ihe abụọ maka njikwa Mfe nke mmiri na mmiri na iyi mmiri ozugbo
Mfe Mbido - Ihe niile akwadoro maka nrụnye gụnyere.
Ntụziaka nwụnye 2321300B
Họrọ obodo Åland IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua na BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Saint Eustatius na SabaBosnia na HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongo (Brazzaville)Congo (Kinshasa)Cook IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Southern n'ókèalaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiNụrụ Island na McDonald IslandsHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle nke MmadụIsraelItalyIvory CoastJamaicaJapanJerseyJọdanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacaoMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorth MacedoniaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalestian TerritoryPanamaPapua New GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé na PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts na NevisSaint LuciaSaint Martin (Dutch akụkụ)Saint Martin (French akụkụ)Saint Pierre and MiquelonSaint Vincent na GrenadinesSamoaSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Georgia / Sanwichi IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard na Jan MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad na TobagoTunisiatoro toroTurkmenistanTurks and Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited Alaeze (UK)United States (US)United States (US) Minor dịpụrụ adịpụ IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVaticanVenezuelaVietnamVirgin Islands (British)Virgin Islands (US)Wallis and FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
Back ụgbọ ibu azụmahịa
Oghere Ugwu Ugwu Na-asa Ahụ Ebe athlọ Ọrụ Na-asa Ahụ 3B-AMUS: ebe ntanetị dị n'etiti 2321300 '' - 6 ''; Oghere oghere: 14 - 32 mm / 38 - 1.26 ''
Teknụzụ Njikọ Ntanetịsị Esemokwu: dị mfe iji wụnye onwe gị na-enweghị plọmba, jiri mkpọpụta gbapụta. Chekwaa ụgwọ ngwa ngwa WUTA FAUCET
Black 2-Handle Bath Faucet: matte black surface, classic and simple, guzogide corrosion na tarnishing site na iji ụbọchị niile, dabara n'ụlọ mgbazinye, ogige, ulo, lavatory, eji azụmahịa, ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ.
Ahịhịa ọyịsọ na-enweghị mmiri: mmiri ọkụ NSF seramiiki na mmiri na-azọpụta ABS onye na-achi mmiri anaghị agbapụta mmiri ma na-eduga, ka ọ dị ugbu a, jiri nwayọ, mmiri mmiri kwụsiri ike site na iji aka abụọ jiri obere mbọ.
AKW LKWỌ AKWIFKWỌ AKW withKWỌ AKW withKWỌ AKW withKWỌ AKW withKWỌ AKW withKWỌ MAKA EGO: Ezochiri ya site na ụbọchị iri ụbọchị 90 n'efu na akwụkwọ ikike nke ndụ! PLEASE CONTACT EMAIL❤service@wowowfaucet.com
SKU: 2321300B-AMUS Categories: Ime ụlọ ịsa ahụ, Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ Tags: 8 Inch, Black, igbapu
12.1 x 8.6 x 3 sentimita
4.8 sentimita asatọ
3.1 sentimita asatọ
J *** h2020-05-28
gosiri 5 si 5
Azụtara m Delta na Phisher ọkpọkọ tupu na ọnụ ahịa dị elu. Ngwaahịa WOWOW karịrị ihe m tụrụ anya maka ogo, ịdị mfe nke nrụnye na uru maka ego m. Ọ dị ịtụnanya na ụlọ ịsa ahụ ọhụrụ m. Ọbụna nkwakọ ngwaahịa ahụ bụ klas dị elu. O-yiri mgbaaka m wuru na ala ị ofụ na ọkpọkọ iji gbochie ụta. Mgbanwe mgbakwunye mgbakwunye ahụ nke bịara ya bụkwa plọg wee kpọọ na-enweghị ihihi. Anaghị m eme ọtụtụ nyocha ngwaahịa mana enwere m afọ ojuju maka ngwaahịa a na echere m na m ga-eso gị kerịta ya.
T *** t2020-06-01
N’oge na-adịbeghị anya, m rụzigharị ụlọ ịsa ahụ m nke gụnyere dochie ụlọ ịsa ahụ ụlọ ịsa ahụ m ochie na kabinet ya na nke ezigbo mma. Nke a chọrọ pọmpụ ọhụrụ juru ebe niile.
N'ihi nrụzigharị ahụ, enwekwaghị m ebe ịsa ahụ na-arụ ọrụ. Ya mere, ebe ọ bụ na achọrọ m ọkpọ mmiri ọhụrụ ahụ ozugbo, achọgharịrị m ụlọ ahịa akụrụngwa m, gụnyere nnukwu ụlọ ahịa na-echekwa ahịa. O juru m anya ma wute m na, ọ bụghị naanị na ha nwere oke nhọrọ nke ihe eji achọ ụlọ ịsa ahụ zuru ebe niile, mana ha niile ruru ihe ruru $ 100!
M kpebiri na m nwere ike na-enweghị na-arụ ọrụ sink maka ụbọchị ole na ole, na m chere na ụfọdụ ga-a mma nhọrọ nakwa dị ka a mma price;
Achọtara m ngwa ngwa ngwa ngwa iji ọnụ ahịa dị ala karịa nke m chọtara n'ụlọ ahịa mmezi ụlọ m. Ekpebiri m na mgbakọ a, m enweghịkwa ike inwekwu ọ happụ. Igwe mmiri ahụ nwere nickel mara mma mara mma, a na-etinye ihe niile maka ntinye, ma e wezụga obere eriri abụọ dị ọnụ ala nke dị mkpa iji jikọọ na mmiri. Enwere m enyi na-enyere m aka n'ịrụgharị ọrụ ahụ, ma tinyekwa ọkpọ mmiri ahụ. Agbanyeghị, ejiri m n'aka na m gaara eme ya n'onwe m, n'ihi na ọ bụ naanị akụkụ ole na ole iji zukọta, ntuziaka ndị akọwapụtara kwụ ọtọ ma dịkwa mfe nghọta ma soro. Ana m eziga eserese nke igwe ohuru ohuru m na pọmpụ ndị etinyere na arụ ọrụ. Ana m akwado nzukọ mgbakọ pọmpụ a zuru ebe niile maka ọrụ ya, ọla kọpa eji ya rụọ ọrụ, mma ya na ihe m chere dị ezigbo mkpa-ọ dị mfe itinye ya.
Otu akụkụ ọzọ nke mgbakọ ọkpọkọ a bụ "ihe nkwụsị" maka nsị. Ọ na-emechi site na ịkwanye ya, ọ na-emepekwa site na ịkwatu ya ọzọ. Ekwenyere m na nke a bụ nnukwu mmelite karịa ụdị ihe nkwụsị ochie, nke chọrọ ka ị jiri lever mepee ma mechie ya. Eleghi anya m bụ onye ọzọ, mana enwebeghị m ụdị ochie nke anaghị arụ ọrụ. N'ezie, ọtụtụ oge, achọpụtara m na m na-atụfu ya kpamkpam. Obi dị m ezigbo ụtọ ịnwe, ihe m weere dị ka, onye nkwụsịtụ ka mma. Nke a nwere ike iyi ka ọ bụ obere mmekpa ahụ na ụfọdụ, mana maka ndị anyị lebara nsogbu nke ụdị ihe ochie ahụ anya, ọ bụ atụmatụ nnabata.
D *** t2020-06-03
Ezi mma maka ọnụahịa ahụ! Ọgwụgwụ anya nke ukwuu na ọkpọkọ mmiri na-arụ ọrụ dị ka o kwesịrị. Ahịa ọrụ dị ukwuu, mmapụta gbapụta-adịghị arụ ọrụ maka m sink (kwa mkpụmkpụ). M emailed na-ere na n'ime 10 nkeji ha wee na a resulution. Ha hụrụ a ọhụrụ igbapu na bụ ogologo na ọkụ n'isi / imewe nke ọkpọkọ, wee zitere m a nkwụghachi ịzụta ọhụrụ. igbapu.
J *** k2020-06-07
Ihe ndị a bụ ụfọdụ pọmpụ kachasị mma m zụtara, ọkachasị na ọnụahịa ego a. Ha mara mma, dị mma ma dịkwa mma na ime ụlọ ịwụ ahụ m emegharịrị ọhụrụ. Ejiri m ọnụ dị oke ọnụ karịa maka ndozi ụlọ elu ma nke a dị mma karịa. N'ikwu eziokwu, ọ dị ka ọrụ ma Moen ma ọ bụ Delta mana ọ gafere 50% obere. AKW recommendKWỌ m kwadoro ngwaahịa a.
M *** r2020-06-11
Igwe mmiri a dị ịtụnanya! Mgbe m na-arụ ọlụ, ahọpụtara m mmiri dị iche iche na CHROME maka ime ụlọ ịwụ na kichin m. Dịka o kwesịrị, okwu ị nwetara ihe ị kwụrụ ga-abụ eziokwu mana ọ bụghị n'okwu a. Enweela m ndị a n'ime ime ụlọ ịwụ m na-eji kwa ụbọchị ihe karịrị ọnwa 6 ugbu a ma ndị a bụ ihe ndị kachasị amasị m. Enweghị m nsogbu ọ bụla na leaks, njikwa na-arụ ọrụ, nrụgide mmiri ma ọ bụ mkpesa ndị ọzọ na-emekarị na ọkpọkọ. Udara n'elu na a foset bụ na ọ naghị egosi na mmiri tụrụ. Ekwesịrị ịsachasị pọmpụ ndị ọzọ niile ụbọchị ole na ole iji na-ele ọhụụ mana ọ bụghị nke a. Enwere m ike ịga izu abụọ na ọkara n'emeghị ya ma ọ bụ kpochapụ ya ma ị nweghị ike ịkọ. Enwere m ịhụnanya na ọkpọkọ ndị a. Ha na okpokoro ihe eji akwụ ụgwọ Pfister Price m ma ọ bụ sọsọ pipụ na-adị mma oge niile.
A *** h2020-06-13
M dochie a elu ụlọ ịwụ ahụ foset na nke a. Ngwa ngwa ijikọ hoses mere ịwụnye ikuku ma ọ masịrị m nke ukwuu na ogo ogo ya na ole mma nke a karịa nke ochie anyị. Echere m na m na-ewere a ohere na a ika m anụbeghị banyere tupu ma ihe dị ka ọkara price nke ihe m gaara akwụ ụgwọ na a nnukwu igbe ngwaike ụlọ ahịa na nke a bụ ihe ịrịba uru.
B *** e2020-06-16
Anọ m na mgbazinye ma achọghị m itinye ton na dochie eriri mmiri abụọ na nna m ukwu. Enwere m obi ụtọ karịa nke ndị a. Ogo dị elu ma dị mfe ịwụnye. Dị ka ọ na - adịkarị, ọ na - ewe ogologo oge iji wepu nke ochie karịa ịwụnye ndị ọhụrụ… Ọ na - abụkarị na ị na - ata ahụhụ na mma mgbe ị na - achọ uru. Oge ga - agwa, mana rue ugbua ihe ndị a dị mma maka ego ahụ.
K *** b2020-06-18
M na-ejikarị naanị Big Aha Brand Faucets anyị Facility. Ma mgbe m hụrụ nyocha ndị ahụ, ekpebiri m ịnwale otu.
Obi dị nnọọ ụtọ na mma nke ọkpọkọ, na ala nke echichi. Unit na-enwe mmetụta siri ike, ma wuru ya nke ọma, na njikọ ndị ahụ ejiri igwe anaghị agba.
R *** w2020-06-20
gosiri 4 si 5
N'anya a foset !! Akwa mma maka nnukwu ego. Lelee na Lowe na otu ọkpọkọ bụ $ 119 maka otu. Maa kwadoro!
D *** m2020-06-24
Kwesịrị ịchọta eriri mmiri ọhụrụ mgbe ị na-emegharị obere ụlọ ịsa ahụ. Hụrụ sleek anya nke a set. M zụtara ya dị ka MATTE nwa na-atụ anya na ubé ọzọ greyish ụda ma nke a bụ mara mma nke ukwuu. Ihe akụrụngwa ndị ọzọ dị n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ dị nso na agba greyish mana enwere m ike ibi na nke a. Anyị remodeler kwuru otú mfe nwụnye dị mfe. Igwe mmiri ahụ na-arụ ọrụ dịka o kwesiri, ya mere enwere m obi anụrị na ọnụ ahịa ya ziri ezi.
N *** n2020-06-26
Ọ bụ onye ma ihe ha na-eme mere nrụrụ a. Ha nwere akàrà ma ọ bụ okpu n’elu ugwu ọ bụla iji gbochie mmiri ịpụ. Ntinye dị mfe na ngwa ngwa. Ihe ndị a dị oke mma nke mere na ọ bụghị naanị na ha dị mma kama ọ ga-ata nchara.
Azụrụ m ihe ndị m rụpụtara na mbụ site n’ụlọ ahịa ngwaike dị n’obodo maka ụgwọ dị ukwuu karị, ma ha erughị afọ 3. Mgbe ahụ mgbe m gara wepu ha, achọpụtara m na ukpa ahụ tara nchara na m ga-ebipụ ya. O doro anya na ọ dịghị ezigbo akara gburugburu ntọala nke valvụ ahụ na mkpụrụ ahụ bụ nke ihe dị ọnụ ala nke nchara. Ebe ọ bụ na ọ dị n'ime kabinet ma sie ike ịbịaru, nke a were ọtụtụ awa.
Ọ bụ ya mere obi ji tọọ m ụtọ mgbe m hụrụ otú e si hazie ụlọ a na ụdị ihe ha ji wuo ya.
E *** e2020-06-28
Nke a foset zuru okè! N'anya otú o si anya, mfe iji wụnye, oké arọ ọrụ mma. Enweghị mkpịsị aka. Anyị gbara gburugburu mana achọghị imefu $ 100 ka anyị wee nwee ohere na ndị a ma nwee obi ụtọ na anyị mere. Will gaghị na-emechu ihu.
A *** d2020-06-30
Eji m nke a dochie anya mmiri ochie m. Obi dị m ezigbo ụtọ! O di ka odi nma ma dikwa nfe itinye onwe m !! Achọrọ m ịzụta ihe abụọ ọzọ iji dochie pọmpụ ochie ndị ọzọ.
A *** k2020-07-01
Anyị na-edochi pọmpụ ụlọ ịsa ahụ ise nke jiri okpukpu abụọ karịa nke a. Ndị a mara mma nke ukwuu, dị mfe ịwụnye ma rụọ ha nke ọma. Naanị ihe m ga-ekwu na nke ahụ bụ ihe na-adịghị mma bụ na ntuziaka ahụ kwesịrị ịgwa gị ka ị zụta ihe eji agbapụta eriri ọkpọkọ iji jiri eriri ọkpọkọ mmiri. A haziri ọkpọkọ drain ahụ maka sinks nke nwere oghere juputara wee nwee oghere n'akụkụ n'akụkụ okpuru stopa, n'etiti akụ na gasket na ala. Eriri a di ezigbo nso ma achoputara m na mmiri mgbe igbapu ga agbapu nke oghere ahu ma gbapuo na eri ma tinyekwa nkpuru ahihia. Ejiri ihe eji etinye ya. A gwara gị ka ị jiri plumbers putty ebe drain na-ejikọ ya na elu nke sink, mana nke ahụ abụghị isi iyi nke nchapu ahụ. Nweta eriri eriri. IMO, ị gaghị enwe ike imehie ihe a na-akwụ ụgwọ na ọnụahịa ahụ!
L *** r2020-07-06
Ma ọ bụ naanị ọnụahịa dị obere maka nnukwu ọkpọkọ a, ọ dị mfe ịwụnye. Mmiri gbapụta dị mma. Echere m na ọkpọkọ mmiri a ga-adịgide ruo ọtụtụ afọ. Igwe mmiri yiri nke a site na nnukwu brik na ngwa agha ga-efu okpukpu atọ karịa nke ọkpọ a. M ukwuu nwere ike ikwu na ga-maa ịzụta ọzọ.
G *** d2020-07-09
Azụrụ m nke a iji dochie pọmpụ mmiri dị afọ 25. Echichi ahụ bụ ikuku ọbụna maka onye na-ahụ ihe n’onwe m nke malitere ọrụ. Nanị ihe isi ike bụ iwepụ ụrọ mmiri ochie. Ndị na-eweta njikọ dị mfe mere ka nrụnye bụrụ ihe na-enweghị mgbu. Nanị mkpesa bụ na a na-eji ihe dị mfe etinye ihe ọkụkụ ma e jiri ya tụnyere ọkpọ mmiri ochie nke ọ gbanwere. Ngwa a mechara na-adị mma n'anya ma nwekwuo ọmarịcha.
M *** s2020-07-21
Awụnyere na bat adịghị eji ya eme ihe ọ nweghị ahụmịhe ndụ na ya mana ngwugwu zuru oke na ihe niile ịchọrọ ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma, dị mma. Ihe nkwụsị ahụ bụ ihe na-emechi iji mechie ngwaọrụ karịa mkpanaka a na-emebu iji bulie ma wedata ihe nkwụsị ahụ. Enweghị m ịhụnanya na nke ahụ mana eziokwu dị mfe ma nwee nsogbu na ya ma ọ bụrụ na ị danye ihe na mmiri, ị nwere ike ịdọrọ nzukọ ahụ niile ma weghachite ya. Nke ahụ nwere ike ịbụ karịa karịa ọjọọ nke enweghị mkpanaka imeghe / mechie ihe nkwụsị ahụ.
Igwe mmiri a na-arụ ọrụ nke ọma na ime ụlọ ịwụ ahụ anyị. Ntinye dị mfe site na otu ihe iji mara. Ngwa ngwa jikọọ hoses na-abịa na ọkpọkọ mmiri ga-anọdụrịrị ike mgbe arụnyere. Echere m na m jikọtara ha ọfụma mana mgbe agbanyere mmiri ma meghe mmiri ahụ, ha abụọ kwụsịrị. Mfe dị mfe, cheta na ị ga-agbasi ike mgbe ị na-etinye hoses.
Enwere m obere okwu na onye na-ekwu okwu na ọkpọkọ mmiri wee chọpụta na ọrụ ndị ahịa WOWOW na-adị ngwa ma na-anabata. Nnukwu ụlọ ọrụ, nwere ike ịkwado mmiri a.
H *** s2020-07-26
Naanị nwetara nke a ma wụnye ya. Ọ bụ nnọọ mfe instal, magburu onwe nkwakọ ngwaahịa na ezigbo mma igwe uru. Agụrụ m ọtụtụ nyocha tupu m azụrụ ma enweghị uche. Ruo ugbu a ọ dịghị ehi ehi ma ọ dị oke mma. Ọ bụrụ na ihe ọ bụla gbanwere, m ga-edeghari nyocha m. Na mgbakwunye, ozugbo enwetara ngwaahịa ahụ, enwetara m ozi email site n'aka ndị na-ere. O kwuru na ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla m ga-akpọtụrụ ha ozugbo. Dika m kwuru si magburu onwe ya. Cheta na obu ezigbo ego.
S *** c2020-07-28
Anyị hụrụ ọkpọkọ mmiri a n'anya. Ntinye bọtịnụ push push dị oke mma. Ihe ndị a na-eme nke ọma na mmiri na-aga nnukwu. Azụrụ m ya maka nghazi ụlọ ịsa ahụ zuru ezu m na-eme ma na-echegbu onwe m maka ịzụta ihe dị otú ahụ n'ịntanetị na-enweghị ịhụ ya n'ezie. Ọ karịrị ihe m tụrụ anya ya. Daalụ maka nnukwu ngwaahịa na ahụmịhe dị ukwuu na nzụta a.
K *** s2020-08-05
Ihe ọkpọkọ mara nke ọma ma jupụta nke ọma. A na-eme spigot ka ọ bụrụ ebe etiti ya dị mma. Gasketing na akwa akwa n'okpuru ọkpọkọ na spigot na-ọma chere nke ọma iji gbochie mmiri intrusion. Ihe eji eme ihe dika odi nma. Mgbapụta na-achapu mmiri na ọdụdụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị siri ike dị ka ihe a gbanwere, karịrị nke zuru oke. Ntinye esighi ike ma ihe ngwaike di. Nkwakọ ngwaahịa dị mma na ọkpọkọ mmiri ọ bụla na spigot n'otu n'otu na-etinye akpa ya na ọkọlọtọ n'ụzọ na-apụtaghị.
C *** n2020-08-11
Ezigbo ngwaahịa dị na Deplọ Nche na enweghị ike ịchọta nke masịrị m ma chọta nke a na WOWOW maka $ 20 obere. Ntinye akwụkwọ dị mfe ma etinyego m mmiri ole na ole kemgbe ọtụtụ afọ ma nke a bụ otu kachasị. Ihe niile siri ike, enwere m mmasị na igbapu mmiri nke bịara ya nke dị mma karịa ndị nwere ihe na-adọta n'azụ pọmpụ ahụ. Ga-enwerịrị ike ị nweta ọzọ mgbe m megharịrị ụlọ ịsa ahụ ọzọ.
w *** o2020-09-29
Zụtara nke a iji dochie pọmpụ mmiri dị m na-agba. Ọ dị mfe ịwụnye. O were m ihe dịka ọkara elekere iji wepụ ụrọ mmiri ochie na ihe dị ka minit 20 iji wụnye nke ọhụrụ a. Ọ na-abịa na mmiri gbapụta, nke m na-amasịkwa nke ukwuu. Ha na-ele anya nke oma. Amaghị m ogologo oge ha ga-anọ, mana enwere m obi ụtọ na ịzụta maka ugbu a.
WOWOW ime ụlọ ịwụ ahụ Centerset Faucet Chrome
White Square Basin igwekota Taps
Nnukwu -lọ Achịkwa Mkpọrọ Alọt 2 na-akpọ Faucet Ch ...
WOWOW ime ụlọ ịwụ ahụ na swivel Spout Black
KWESỊTA ANYỊ NZỌ
KPỌTỤRỤ ANYỊ Adreesị China: 119Th Berth, ala ala nke mbụ 1. Yanjiang East Road Shui Kou Town Kai Ping City Guang Dong Province China +86 19927601787 (9 am-18 pm GMT + 8) E-mail: sales@wowowfaucet.com
Ikike Njirimara ikike
ụlọ ọrụ Ama
Copyright © 2020-2025 WOWOW INC. Ikike niile echekwabara.
ụgbọ ibu azụmahịa
Nabata na weebụsaịtị WOWOW FAUCET
CAD Dollar dollar
Echefula Ya: Zụta 1 Nweta 1 Na 10% Gbanyụọ igbasa
Na-akparịta ụka na anyị